Etu esi eweputa ndu site na ngwa ahia ahia | Martech Zone
Etu esi eweputa ndu site na ngwa ahia
Wednesday, April 22, 2015 Wednesday, April 22, 2015 Douglas Karr
Anyị edere na omimi banyere akụrụngwa ahịa azum, kedu atụmatụ dị oke egwu, na ihe ịma aka ndị na-eweta atụmatụ ndị ahụ iji duga ụzọ.
Ebumnuche nke igwe na-ere ahịa bụ imeri nnukwu ọdịiche dị n'etiti ahịa na ahịa, na-eme ka ọ bụrụ nnukwu ahịa na-eduga na ngalaba ahịa na oge kwesịrị ekwesị. Nke a na - enyere aka melite ogo ndu yana belata mbọ dị mkpa iji mechie ire ere ahụ. N'ikpeazụ nke a na - eme ka ọnụ ọgụgụ ndị ndu, uru nke ndu, na - ebelata ọnụ ahịa niile maka ndu.
Nnyocha ndị e mere n'oge na-adịbeghị anya banyere ndị na-ere ahịa akpaaka na-egosipụta ike iji tụọ nsonaazụ ziri ezi yana mmụba dị ukwuu na-eduga dị ka uru dị ukwuu nke ngwanrọ ahụ. Mbido nnyocha si Venturebeat si ahịa akpaaka ọmụmụ na-egosi na akụkụ nke abụọ kacha sie ike maka azụmaahịa azụmaahịa maka ndị ọchụnta ego na-arụ ọrụ otu sọftụwia a si dabaa na nzukọ ha. Nke mbụ bụ ọdịiche dị n'etiti ngwaahịa.
Ihe omuma ihe a sitere Ntuziaka Technology, saịtị maka azụmaahịa iji chọpụta ma nyocha teknụzụ.
Tags: edu ọgbọeduakụrụngwa ahịaahia akpaaka atụmatụahia na-eduga
Etu esi lelee ọnọdụ ngalaba gị site na isiokwu na Mobile na Desktọpụ
6 Uru nke Nzukọ Ahịa na Ọha Ntaneti